အခြားတစ်ဖက်က ဝင်ထွက်ကြည့်ကြရန် | t h oeh tan e
ByaN T I Ma5 Comments
အစိမ်းသည် အရောင်ဖြစ်ပါက မြက်များသည် နွားများကိုအဆိပ်သင့်စေလိမ့်မည်
ထို့ကြောင့် မြက်များသည် နွားများကိုအဆိပ်သင့်စေသည်
ယခုအချိန်အထိ နေသည်မနက်ခင်းတိုင်း အရှေ့အရပ်မှထွက်လေ့ရှိသည်
ထို့ကြောင့် မနက်ဖြန်လည်း နေသည်အရှေ့အရပ်မှ ထွက်ပါလိမ့်မည်
ထို့ကြောင့် ဒီပဲများသည် ဒီပုတ်ထဲကဖြစ်မည်
ဖျော်ရည်တစ်ခုကို ကြွက်ကြွက်ဆူသောရေဖြင့်ဖျော်စပ်ပါက ပူပါလိမ့်မည်
ဤဖျော်ရည်ကို ကြွက်ကြွက်ဆူသောရေဖြင့် မဖျော်စပ်ခဲ့ပါ
ထို့ကြောင့် ဤဖျော်ရည်သည် မပူနိုင်ပါ
ထို့ကြောင့် အလွန်အမင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့် အလွန်အမင်းဝမ်းနည်းခြင်းသည် အတူတူပင်ဖြစ်သည်
လူသားအချင်းချင်း ဓါးဖြင့်ထိုးခွဲလှီးဖြတ်ခြင်းသည် ရာဇဝတ်မှုဖြစ်သည်
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များသည် လူသားများကို ဓါးဖြင့်ထိုးခွဲလှီးဖြတ်လေ့ရှိကြသည်
ထို့ကြောင့် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များသည် ရာဇဝတ်ကောင်များဖြစ်သည်
ချစ်စဖွယ်မိုးဦးရာသီမနက်ခင်း၌ ကျွန်ုပ်၏ပြူတင်းပေါက်မှတဆင့် စံပါယ်ပန်းရုံတစ်ရုံလုံး စွင့်စွင့်ကားကားပွင့်နေသည်ကို မြင်ရလေသည်။ မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်အဲသလိုမမြင်တွေ့ပါဘူး။ ဒါပေတဲ့ ကျွန်ုပ်မြင်တာကို ဖော်ပြဖို့က ဒီတစ်နည်းပဲ ရှိရော့မယ်။ ဒါကလည်း အဆိုပြုချက်တစ်ခု၊ ဝါကျတစ်ကြောင်း၊ အချက်အလက်တစ်ခု။ အမှန်ကတော့ ကျွန်ုပ်သိမှုမှာ လက်ခံလိုက်တာက အဆိုပြုချက်တစ်ခုလည်းမဟုတ်၊ ဝါကျတစ်ကြောင်းလည်းမဟုတ်၊ အချက်အလက်တစ်ခုလည်းမဟုတ်တဲ့ ပုံရိပ်သဏ္ဍာန်တစ်ခုမျှသာပဲ။ အဲဒါကိုပဲ အချက်အလက်တစ်ခုကို တည်ဆောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆန်ဆန် ဉာဏစွမ်းအားတစ်စိတ်တစ်ဒေသနဲ့ နားလည်မှုရဖို့ ပြုလုပ်တာပါ။ ဒီတည်ဆောက်မှုဆိုတာကလည်း ခြေခြေမြစ်မြစ်ရှိတာတော့မဟုတ်ပေတဲ့ ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့မှုကတော့ ခိုင်မာခြေမြစ်မှု ရှိပါရဲ့။ ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့သမျှသောဝါကျထဲမှာ ထုတ်ဖယ်ခြင်းအမှုကို ပြုလုပ်ကြည့်ခြင်းမျှသာပါ။ တကယ်ကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ သညာရဲ့ သိမှုအလွှာလွှာအကွက်ကွက်အပေါင်းစုကြီးဆိုတာက ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေါ်အခြေခံပြီး သက်သေပြလိုက် မွမ်းမံလိုက်လုပ်နေရတဲ့ ယူဆချက်သက်သက်တွေကို ယက်ဖောက်ထားတဲ့အမယ်ဘုတ်ရဲ့
ထိုးလက်စသိုးမွှေးဆွယ်တာကြီးပဲ။ သိမှုသညာထဲမှာ ဗလာဟင်းလင်းအကြည့်ရဲ့နောက်ကိုကျော်ပြီး ဘယ်လောက်သေးကွေးတဲ့ ကြိုတင်မှုကိုမှ ပြင်ဆင်ပြုလုပ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။
၂ဝ၁ဝ စက်တင်ဘာလ ၁၁ရက်
5 Responses to “အခြားတစ်ဖက်က ဝင်ထွက်ကြည့်ကြရန်”
ကျွန်ုပ်၏ မဲနေသော ဟာကြီးသည်လဲ ဒီပုတ်ထဲကဖြစ်ရမည်…
be careful! pyote sarr khan nay ya mae. 😀
တကယ်ကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ သညာရဲ့ သိမှုအလွှာလွှာအကွက်ကွက်အပေါင်းစုကြီးဆိုတာက ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေါ်အခြေခံပြီး သက်သေပြလိုက် မွမ်းမံလိုက်…
ဒီကဗျာမှာ အပိုင်း၂ပိုင်းကွဲပြားနေသလို ခံစားမိ (ကဗျာပထမစာကြောင်းမှ “ထို့ကြောင့် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များသည် ရာဇဝတ်ကောင်များဖြစ်သည်”ထိ)အပိုင်း ၁(ချစ်စဖွယ်မိုးဦးရာသီမနက်ခင်းမှ ကဗျာအဆုံးထိ)ထိ အပိုင်း ၂အဖြစ် မြင် အပိုင်း၂ကို ပိုမို အားရ နှစ်ခြိုက် ဆင့်ပွား တွေးခေါ်နိုင်ခွင့်ရအရေးအသားတွေအဖြစ် ထင်မိပါကြောင်း
yes bro, the first part is to show inadequacy of (logical) reasoning and the second part is to open up questions about the relationship/connection between fact and hypothesis or about the signs (signifier and signified). and the whole poem was heavily collaged.
Handling 30 Errors »